यिनै हुन् बहादुरी महिला पाइलट जसले सयौ यात्रुको ज्यान यसरी बचाईन ! विश्वभर चर्चा - Mitho Khabar
June 22, 2022 mithokhabarLeaveaComment on यिनै हुन् बहादुरी महिला पाइलट जसले सयौ यात्रुको ज्यान यसरी बचाईन ! विश्वभर चर्चा
यी पाइलट जसले सयौ यात्रुको ज्यान बचाएर विश्वभर चर्चा कमाईन । स्पाइसजेटको विमानकी पाइलट क्याप्टेन मोनिका खन्ना खुबै चर्चामा छिन् ।
उनको बहादुरी र सीपको प्रशंसा हुँदैछ । मोनिकाले १९१ यात्रुको ज्यान बचाएर विमानलाई सकुशल अवतरण गराएकी थिइन् । वास्तवमा भारत, बिहारको पटनामा आइतबार ठूलो विमान दुर्घटना हुनबाट बच्यो । उड्ने क्रममा विमानको इन्जिनसँग चरा ठो क्किएपछि विमानमा आ गो लग्यो त्यसपछि एउटै इन्जिनले आकस्मिक अवतरण गराइयो ।
प्राप्त जानकारी अनुसार पाइलट क्याप्टेन मोनिकाले स्पाईसजेट बोइङ ७२३ को उडान भर्दै थिइन् । आ गलागी भएको थाहा पाएपछि उनले सुझबुझ देखाएर आ गो लागेर प्रभावित इन्जिन बन्द गरिन् ।
उनको यो कदमका कारण झण्डै २०० जना सवार विमान ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको हो । स्पाइसजेटले आफ्नो विज्ञप्तिमा क्याप्टेन मोनिका खन्ना र उनीसँग सेवा गरिरहेका बलप्रीत सिंह भाटियाले दुर्घटनाको समयमा चलाखीपूर्वक काम गरेर ठूलो दुर्घटना टारेको बताएको छ । मोनिकाले नआत्तिएर परिस्थितिलाई सम्हालेकी थिइन् । स्पाइसजेटले भनेको छ, ‘उनी अनुभवी अधिकृत हुन् । हामी उनीहरूमाथि गर्व गर्छौं ।’
यो विमान पटनाबाट दिल्लीका लागि उडेको थियो । सोही क्रममा आ गलागी भएको थियो । स्थानीयले देखेपछि तत्कालै जिल्ला नियन्त्रण कक्षलाई खबर गरेँ । एटीसी टावरमा बसेका प्राविधिकहरूले पनि विमानमा आ गो लागेको देखेपछि तत्कालै पाइलटलाई खबर गरेका थिए । विमानलाई पटना विमानस्थलमा अवतरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यसपछि पाइलट क्याप्टेन मोनिका खन्नाले आफ्नो सुझबुझ देखाएर दोस्रो इन्जिनको सहयोगमा विमानलाई सुरक्षित अवतरण गराइन् । यो विमानमा १८५ यात्रु र ६ जना बिमान कर्मचारी सहित १९१ जना सवार थिए ।